Semalt: वेबसाइटहरू हुनु पर्दछ वेबपेजहरूको आवश्यक प्रकारहरू के हुन्?
एक वेबसाइट मा प्रत्येक पृष्ठ एक आवश्यक उद्देश्य को सेवा गर्दछ। यसैले हामी हाम्रो समय र संसाधनहरू प्रत्येक पृष्ठलाई अनुकूलन गर्न प्रयोग गर्दछौं, यसलाई अवतरण पृष्ठ जस्तो गरी यसलाई व्यवहार गर्ने। यस लेखमा, हामी केहि महत्त्वपूर्ण पृष्ठहरू देखाउँदै छौं जुन प्रत्येक वेबसाइटले अधिकतम एसईओ मूल्यको लागि हुनुपर्दछ।
हामीले हाम्रो विषयमा छलफल सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले एउटा तथ्य बतायौं। "प्रत्येक पृष्ठ एक अवतरण पृष्ठ हो र त्यस्तै व्यवहार गरिनु पर्छ।" जब हामी प्रत्येक पृष्ठ भन्छौं, हाम्रो अर्थ तपाईंको वेबसाइटमा प्रत्येक पृष्ठ हो जुन ईन्डेक्स गर्न योग्य र खोजी ईन्जिनहरू द्वारा क्रॉल गर्न मिल्छ।
के एक राम्रो ल्यान्डिंग पृष्ठ बनाउँछ?
यस प्रश्नको धेरै उत्तरहरू छन्, र उनीहरूले प्रयोज्य, डिजाइन, कुराकानी, आदिसँग गर्नुपर्दछ। यहाँ केही उत्तम लैंडि page पृष्ठ कस्तो हुनुपर्दछ भनेर सुझावहरू छन्।
आगन्तुकहरुको ध्यान कब्जा
आवश्यकताहरू, आवश्यकताहरू, र आगन्तुकहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दछ
सम्बन्धित र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ
वेबसाइटले प्रदान गर्ने समाधान चाहने आगन्तुकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ
एक विशेष कार्य गर्न आगन्तुकहरूलाई प्रभाव पार्छ
विचार गर्दा कि तपाईंको वेबसाइटको प्रत्येक पृष्ठले यी सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ, अब तपाईं बुझ्नुहुन्छ किन ती सबैलाई एसईओ पेशेवरको ध्यान चाहिन्छ। यदि एक पृष्ठ तपाइँको आगन्तुकहरु को लागी प्रासंगिक छ, यो एसईओ को लागी प्रासंगिक छ।
जब तपाई विचार गर्न थाल्नुहुन्छ कि सबै पृष्ठहरू बराबर बनाइएको छैन जब चीजहरू अलि ट्रिकर हुन्छन्। एक साइट मा प्रत्येक पृष्ठ मा आधारित अद्वितीय छ:
यो सेवा गर्दछ अद्वितीय उद्देश्य
दर्शकहरूको विशिष्ट प्रकारले यसलाई आकर्षित गर्दछ
यसले कसरी आगन्तुकहरूलाई बिभिन्न लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न निर्देशित गर्दछ
पेशेवरहरूको रूपमा, कुन पृष्ठहरूसँग सबैभन्दा मूल्य छ र डिजिटल मार्केटिंग अभियानमा विभिन्न बिन्दुहरूमा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नु हाम्रो काम हो। त्यसोभए प्रत्येक पृष्ठलाई समान रूपमा व्यवहार गर्दा, त्यहाँ केहि बुँदाहरू छन् जहाँ पृष्ठ अरूहरू भन्दा बढि मूल्यवान हुन्छ।
ध्यानमा राख्दै, यहाँ केहि पृष्ठहरू छन् जुन तपाईंले ध्यान दिनुपर्दछ र किन उनीहरूले महत्व राख्दछन्। यी पृष्ठहरू प्राय: तपाईंको अप्टिमाइजेसन अभियानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
गृह पृष्ठ प्राय: वेबसाइटको पहिलो र सबैभन्दा धेरै हेरिएको पृष्ठ हुन्छ। आन्तरिक पृष्ठबाट गृह पृष्ठमा नेभिगेट गर्नको लागि यो पनि सम्भव छ; कुनै पनि तरिकाले, उनीहरूको गृह पृष्ठमा के हेर्ने आशा गरिन्छ।
गृह पृष्ठहरू यति महत्त्वपूर्ण छन् किनकि उनीहरूले सम्पूर्ण वेबसाइटको प्रकार्यको बारेमा सारांश प्रदान गर्दछ। साधारणतया, तपाईको गृह पृष्ठ तपाईको साइट, उत्पादनहरू, र तपाईले प्रदान गर्ने सेवाहरूको "ठूला तस्विर" हुन् र किन एक आगन्तुक तपाइँसँग व्यापार गर्न छनौट गर्नुपर्दछ।
घर पृष्ठ एक ढोकाको साथ साथै तपाईंको साइटमा धेरै दर्शकहरूले देख्ने पहिलो कुरा हो। यसको मतलब गृह पृष्ठले निर्धारण गर्न सक्दछ कि यदि उपभोक्ताले तपाईंको साइटमा यात्रा शुरू गर्छन् वा छोड्छन्। यदि तिनीहरूले तपाईंको साइटको बारेमा बढि जान्ने निर्णय गरे भने, तपाईंको गृह पृष्ठले अन्य पृष्ठहरूमा विश्वव्यापी पोर्टलको रूपमा सेवा गर्दछ जहाँ उनीहरूले तपाईंको प्रस्तावको बारेमा बढि विवरणहरू फेला पार्नेछन्।
धेरै एसईओ पेशेवरहरू व्यावासायको प्राथमिक उत्पादको लागि गृह पृष्ठहरू अनुकूलन गर्ने प्रशंसक हुन्। यो रणनीति मात्र समायोजित गरिन्छ जब वेबसाइट एकल उत्पाद वा सेवा प्रस्ताव गर्दछ। तर जब एक वेबसाइटले एकवचन उत्पाद क्षेत्र भन्दा बाहिर केहि प्रस्ताव गर्दछ, त्यो अप्टिमाइजेसन रणनीति अपर्याप्त हुन्छ।
एक उत्तम र अधिक स्थिर गृह पृष्ठ अप्टिमाइजेसन रणनीति भनेको कम्पनी र यसको ब्रान्डको नाममा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। यसले गृह पृष्ठलाई अनुकूलन गर्न सजिलो बनाउँदछ किनकि जब खोजी ईन्जिन प्रयोगकर्ताले कम्पनी वा ब्रान्ड नामको लागि खोजी गर्दछ, गृह पृष्ठ उच्च रहन्छ, र तपाईंको घर पृष्ठ तपाईंको प्रतिस्पर्धीको साइटमा अन्य पृष्ठहरू भन्दा बढी सान्दर्भिक हुनेछ।
यद्यपि तपाईको गृह पृष्ठलाई अनुकूलन गरीरहेको छैन। वास्तवमा, सment्लग्नताको लागि तपाईंको गृह पृष्ठलाई अनुकूलन र क्लिक-थ्रु अधिक लाभदायक मान्न सकिन्छ। अन्त्यमा, श्रेणीकरणले मात्र तपाईंलाई क्लिकहरू प्राप्त गर्ने अवसर दिन्छ।
हाम्रो कामको अंश तपाईंको घर पृष्ठ असाधारण प्रदर्शन गर्दछ भनेर सुनिश्चित गर्नु हो। यदि गृह पृष्ठले वेबसाइटमा आगन्तुकहरू राख्न असमर्थ छ, तब यसमा काम गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो पृष्ठ बारे
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि ग्राहकहरु जसले साइट को बारे मा हामी को पृष्ठ मा हेराइएका छन् रूपान्तरण बढी सम्भावना छ। यी तथ्या .्कले दुई मध्ये एक चीज प्रमाणित गर्दछ।
लक्षण: यसको मतलब आगन्तुकहरू जसले कमिटि गर्न अघि हाम्रो बारेमा पृष्ठमा क्लिक रूपान्तरण गर्न सक्छन्।
नतिजा: हाम्रो बारेमा पृष्ठमा क्लिक गर्ने आगन्तुकहरू यसको सामग्रीबाट पर्याप्त रूपले विश्वस्त छन् र यदि पृष्ठले उनीहरूले सिक्ने आशा गरेको जानकारीलाई तृप्ति गरे भने रूपान्तरण हुन सक्छ।
केहि पेशाहरु हाम्रो बारे मा दुई चीज मध्ये एक पृष्ठ को लागी विचार गर्न छनौट; अर्कोतर्फ, हामी हाम्रो बारेमा पृष्ठ दुबै को एक सानो हो लाग्छ। हाम्रो बारेमा पृष्ठ रूपान्तरण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
कुनै पनि राम्रो अवतरण पृष्ठको साथ जस्तै, हाम्रो बारेमा पृष्ठ रूपान्तरण प्रक्रियामा यसको भूमिका खेल्नै पर्छ। जब हामी भन्छन कि हामी हाम्रो बारे मा पृष्ठ अनुकूलन गर्न चाहन्छौं, हामी यहाँ केहि टाढा हेरिरहेका छौं किनभने धेरै ग्राहकहरूलाई लाग्छ यो हाम्रो बारेमा पृष्ठ अनुकूलन गर्न अलि अनौंठो छ। हामी उनीहरूलाई हाम्रो पृष्ठलाई अनुकूलित गर्ने महत्त्वको बारेमा व्याख्या गर्दछौं, र हामी उनीहरूलाई यी पृष्ठहरूको लागि अनुकूलित गर्न सक्ने धेरै कुञ्जी शब्दहरू देखाउँदछौं। एक उद्योग वा कम्पनीमा सम्बन्धित कुञ्जीशब्दहरू हाम्रो पृष्ठको लागि पहिले नै उत्तम रूपमा कुञ्जी शब्दहरू छन्। र यदि हामी यथार्थपरक हुन कोशिस गर्दैछौं भने यी केही कम्पनीहरू, एजेन्सीहरू, फर्महरू, व्यवसायहरू, अफिस ब्यूरो, र अन्य सम्बन्धित प्रकारका कुञ्जी शब्दहरूका वेबसाइटमा कुनै पनि अन्य पृष्ठमा फिटिंग गर्न गाह्रो हुन्छ।
हामीलाई पृष्ठ सम्पर्क गर्नुहोस्
त्यहाँ धेरै धेरै मात्र कारणहरू छन् किन आगन्तुकहरू हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् पृष्ठमा जान्छन्: तिनीहरूलाई तपाईंको व्यवसायको सम्पर्क जानकारी चाहिन्छ। यो जानकारी धेरै कारणहरूको लागि उपयोगी छ; तिनीहरूले कल गर्न निर्णय गर्न सक्दछ, ईमेल पठाउन, वा तपाईंको व्यवसाय कहाँ अवस्थित छ जान्न। अन्तिम विकल्प हाम्रो लागि विशेष चासोको हो।
चाहे तपाईं स्थानीय वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो, त्यहाँ ग्राहकहरू छन् जसले तपाईंको व्यवसायको भौतिक प्रतिनिधित्व देख्न मन पराउँछन्। केही ग्राहकहरू नजिकको कम्पनीहरूसँग व्यापार गर्न रुचाउँछन्। जबकि स्थानीय व्यवसायहरू तपाईको राजस्वको प्राथमिक स्रोत नहुन सक्छ, त्यहाँ कुनै कारण छैन किन तपाई यसलाई बेवास्ता गर्नु पर्छ।
हामी तपाईंको स्थानमा तपाईंको अप्टिमाइजेशन प्रयासहरू केन्द्रित गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। यसले समावेश गर्दछ:
खोज्ने खोजशब्दहरु खोजकर्ताहरु जुन तपाईको स्थानसँग सम्बन्धित छ।
उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि तपाईंको सम्पर्क पृष्ठमा नक्शा समावेश गर्नुहोस्।
तपाईंको फोन नम्बर र स्थानीय ठेगानामा स्कीमा प्रयोग गर्नुहोस्।
ग्राहकलाई तपाईंसँग सम्पर्क गर्न सजिलो बनाउँदै।
तपाईंको सम्पर्क पृष्ठ एक सगाई पृष्ठ हो। यदि तपाइँको सम्पर्क पृष्ठले यसको काम गरिरहेको छ भनेर जान्ने एउटा तरिका इनबाउन्ड ट्राफिकको बनाम व्यस्तताको स .्ख्याको अध्ययन गरेर हो। यदि तपाईंसँग धेरै ट्राफिकको लागि कम स engage्लग्नता छ भने, यो एउटा संकेत हो कि तपाईं सही सम्पर्क विकल्पहरू प्रदान गरिरहनु भएको छैन, वा तपाईंलाई सम्पर्क गर्न एकदम गाह्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ।
उत्पाद कोटी र उप-कोटी पृष्ठहरू
तपाईंको उत्पाद कोटी र उप-कोटी पृष्ठहरू SEO अवसरहरूको सुन खानी हो। खरीद चक्रमा, यी पृष्ठहरू के तपाईं शपिंग चरणमा जो एक आगन्तुकलाई विश्वस्त गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। यस चरणमा, एक दर्शकलाई पहिले नै उनीहरूले के खरीद गर्न चाहन्छन् भन्ने राम्रो विचार हुन्छन्, तर तिनीहरूलाई अझै खुला विकल्पहरूको बारेमा बढि जानकारी आवश्यक छ।
यी पृष्ठहरूको उद्देश्य आगंतुकलाई ग्राहकहरूले गर्न सक्ने विकल्पहरू देखाउँनु हो, वास्तविक उत्पादन विवरण पृष्ठ आफैंमा देखाएर। संक्षेपमा, उत्पाद वर्ग पृष्ठहरू आवश्यक पास-पृष्ठ पृष्ठहरू हुन्। आगन्तुकहरूले यी पृष्ठहरू पुन: भ्रमण गर्न सक्दछन् तर तिनीहरूलाई विशेष उत्पादको पृष्ठमा जानको लागि मात्र प्रयोग गर्न सक्दछन्।
SEO ध्यानमा राखेर, यी पृष्ठहरू महाकाव्य हो। हामी यी पृष्ठहरूलाई कुञ्जी शब्दहरूको साथ अप्टिमाइज गर्न सक्दछौं जुन पर्याप्त विस्तृत छ तर धेरै व्यापक छैन, त्यसैले तिनीहरूले मूल्य गुमाउँदैनन् र यति विशिष्ट छैन, त्यसैले उनीहरू सकेसम्म खोजी भोल्यूम प्राप्त गर्दछन्।
तपाइँको वेबसाइट मा हरेक वेबपेज महत्वपूर्ण छ। तपाइँको वेबसाइट मा प्रत्येक पृष्ठ एक उद्देश्य को सेवा गर्दछ। Semalt अथक प्रयास गर्दछ तपाईंको वेबसाइटको प्रत्येक पृष्ठले यसको उद्देश्यमा काम गर्दछ र समग्र वेबसाइटलाई अझ राम्रो बनाउने अन्तिम लक्ष्यको लागि आवश्यक समर्थन प्रदान गर्दछ।
तपाईंको वेबसाइटको पहिलो पृष्ठबाट अन्तिम अन्तिम सम्म, यो महत्त्वपूर्ण छ कि प्रत्येक वेबसाइटको ख्याल राखिएको छ र अभिवृद्धि गर्नेहरूलाई दर्साउँन र रूपान्तरण गर्न अप्टिमाइज गरिएको छ।